कथा : क्यालेन्डर
शनिबार, मङ्सिर २७ २०७७
यसपाली दसैंमा नेपाल जाने हो भने सँगै जाउँ न ! वर्षौँ भो नभेटेको । भेटघाट पनि हुने, नेपाल पनि गइने अनी दसैं पनि मनाइने । के छ ‘प्लान’ ? खबर गर ल !
स्कूल पढ्दादेखिको साथी हरिशको म्यासेजले म खुसी र दु:खी एकैचोटी भएँ । नेपाल जाने कुराले कसलाई पो खुसी बनाउदैन र ? त्यसमाथि ऊसँगको भेट । मन फुरुंग भयो । तर दसैंमा ? झस्किएँ । रेस्पोन्स गरौँ कि नगरौं दोधार भो । सुतेँ ।
खोई किन हो मलाई दसैंमा नेपाल जान मन लाग्दैन । यहाँ आएपछि ५ वटा दसैं यतै मनाएँ । मनाएँ पनि के भन्नु र ! बिताएँ । यहाँ के दसैं के तिहार ? ३६५ दिन नै उस्तै । असोज लागेपछि २ महिना नेपाली क्यालेन्डर समेत हेर्न मन लाग्दैन । काठमाडौं हुँदा त दसैंमा गाउँ नजाने मलाई अहिले त हाइसन्चो भएको छ । बिर्सिन खोजेको दसैँलाई हरिशले फेरि सम्झाइदियो, मन झस्काइदियो । के मैले दसैँलाई बिर्सन पाउंदिन ?
किन खबर नगरेको ? अब एक महिना पनि छैन । टिकट पाउन गाह्रो हुन्छ । फोन ‘रिसिभ्’ गर्नासाथ एकै सासमा हरिशले आक्रोश पोख्यो ।
त्यतिबेला काममा थिएँ, पछि भुलेछु, टार्ने प्रयास गरेँ ।
नेपाल जान्न भन्न पनि गाह्रो, नजानुको कारण सुनाउन त्यो भन्दा अप्ठेरो । आखिर सजिलो त मेरो मेरो पुर्पुरोमै लेखेको रहेनछ ।
म हतारमा छु, छिटो निर्णय देऊ, अर्को फर्मान जारी गर्‍यो ।
जति टारे पनि जति घुमाए पनि आखिर मेरो जवाफ त जान्न भन्ने नै हो । कारण त उसलाई सुनाउन जरुरी हुँदैन । तर पनि मैले आलटाल गरेपछि उसले आँफै पनि त कुरा बुझ्नु पर्ने हो ।
सबै भन्दा ठूलो कुरा मन हो भन्थे बूढापाकाले । तर मनलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने परिस्थिति रहेछ । परिस्थितिले जस्तो सुकै मनलाई पनि ‘डाइभर्ट’ गरिदिने रहेछ । न आफ्नो परिस्थितिको व्याख्या गर्दै हिंड्नु, न अरुले कुरा बुझिदिनु, आखिर धर्म संकट यसैलाई भन्छन् क्यारे । अब फेरि सोध्यो भने जान्नभनिदिन्छु । म निर्णयमा पुगें ।
‘थ्याङ्क गड’ ऊ नसोधी गएछ । उसले काठमाडौं एयरपोर्टको फोटो पोस्ट गरेपछि मैले थाहा पाएँ, ऊ पुगिसकेछ ।
हरिश हतारमा हिड्यो । फ्लाइट पाउन गाह्रो छ । शायद ऊसंग समय पनि धेरै छैन । छोटो बिदामा गएको हुनुपर्छ । छिट्टै फर्किने छ र मलाई सोध्ने छ, किन नगएको ?
छोडेर गएपछि कसरी जानु त ? ओठे जवाफ त फर्काउँला । तर उसले मलाई त्यत्तिकैमा छाड्ने छैन । फेरि सोध्यो भने मैले जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ । म जे थाहा दिन चाहन्न उसले त्यही थाहा पाउने छ ।
अचम्म छ दसैं । चारो लिन गएका चरी गुँड फर्के जस्तो हुन्छ दसैं । रानो माहुरीको वरिपरि झुम्मिएका कर्मी माहुरीको गोलो जस्तो हुन्छ दसैं । त्यसैले त सात समुन्द्रपारबाट पनि फर्किन्छन साथीहरु ।
सोच्छु, मलाई किन दसैंमा घर जान मन लाग्दैन ? मेरो पनि परिवार छ । मेरा पनि त बा आमा छन । म जाँदा रमाएर वरिपरि झुम्मिने बच्चाहरु छन । रबि आयो भनेर हल्ला गर्दै पिंढीदेखि आँगनसम्म भरिने साथीहरु छन् । अब आउँदा दसैं पारेर आइज है, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने ती साथीहरु कति खुसी हुँदा हुन ?
होइन । मनले भन्छ, हेर रबि अब तलाई दसैं दसैं रहेन । तेरो लागि त दसैं पीडा हो पीडा । यो त तेरो दशा हो । अब तँसँग दुई वटा मात्रै ‘अप्सन’ छ । कि रमितालाई बिर्सिनु कि दसैं बिर्सिनु ।
बिडम्बना ! न म दसैं भुल्न सक्छु न रमिता ।
भन्छन् नि प्रीय मान्छेले पर्व समात्छ रे । पर्व समात्ने मान्छेलाई भुल्नै पाइदैन । घर व्यवहारले बिर्सिन थालियो भने पनि पर्वले सम्झाइदिन्छ ।
म रमितालाई भुल्न चाहन्छु । तर ठ्याक्कै दसैं आइदिन्छ, सोलीभरी उसैको याद बोकेर । अनि उसको सम्झनाको अगाडि दसैं त सबै कुरा फिक्का फिक्का देख्छु ।
के रमिताको चाहनामा यो सबथोक भयो ? के रमिता त्यति निष्ठुरी थिइन् ? के उनीमा सान्सारिक चेत थिएन ? के उनले बिगतका सबै वाचा भुलेकी हुन ? के उनले मायाले पोतिएको त्यति सुन्दर कल्पनाको घर भत्काएकि हुन ?
होइन । कदापी होइन । उनको यसमा एकरति पनि दोष छैन । उनलाई त परिबन्दमा पारिएको हो । उनलाई वाध्य बनाइएको हो । उनी आँफैले यो सब गरेको भए मैले सहन्थे । बुझ्थें अनि स्वीकार गर्थेँ । रमिताले आफ्नो खुसीको लागि त्यसो गरिन् अब उनी सुखी र खुसी रहनेछिन् भनेर चित्त बुझाउने थिएँ ।
किनभने म आफू भन्दा उनी बढी खुशी भएको देख्न चाहन्थें । उनको खुशीमा म रमाउथें ।
फेरि त्यही दिन सम्झिएँ, घटस्थापना । घर घरमा जमरा राख्ने दिन । हामीले पनि त्यही दिन जिन्दगीको जमरा राख्ने निधो गरेका थियौं । स्कुलदेखि कलेजसम्मको मायामा अंकुरण् गराउने निश्कर्षमा पुगेका थियौं । अनि सप्तमीमा फूलपातीसङ्गै रमितालाई मेरो घरमा भित्र्याउने योजना बनाएका थियौं ।
घरमा दसैंको टीका लगाएर उनी माइती जाने अनि म ससुराली जाने योजना पनि बनिसकेको थियो । हाम्रो यो सब योजनामा रमिताको परिवारको संलग्नता त थिएन तर असहमति पनि थिएन । असहमति नहुँदा हामी उत्साहित थियौं ।
फूलपातीमा जन्तीसहित भेट्ने वाचा गरेर छुटिएका हामीमा एक दिन अगावै बज्रपात आइलाग्यो । बज्रपातको सूचना रमिताले नै दिइन् ।
प्रीय रबी !
हामीलाई सँगै हुन लेखेको रहेनछ । हाम्रा योजना र तयारी निरर्थक रहे । कम्तीमा जिन्दगीको एक कालखण्ड कल्पनामा बिताउन सक्यौं । भविष्यका कैयौं योजना कोर्यौं । त्यसमा मैले सक्दो सहयोग गरेँ । तर जिन्दगीको योजना कोर्न भन्दा परिवारको जन्जिर तोड्न गाह्रो हुने रहेछ । यसलाई मेरो बाध्यता भनेर बुझिदिनु । सप्तमीको दिन घरमा फूलपाती भित्र्याउनु । पहिले चुपचाप बसेको मेरो परिवारले बिहेको तयारी त गर्‍यो तर एक दिन अवागै मलाई अन्यत्रै अन्माइदियो । मलाई माफ गर्नु, तिमी खुशी रहनु ।
झण्डै दश वर्षदेखिको प्रेम अचानक भरङ्ग हुँदाको क्षण सम्झिदा अझै पनि मेरो मन पोल्छ । चाहेर पनि यसलाई म भुल्न सक्दिन । के यो मेरो कमजोरी हो ? यदि यो मेरो कमजोरी हो भने पनि म स्वीकार्न तयार छु । प्रेमलाई साकार पार्ने योजना सहित दसैं मनाउन घर पुगेको म टीकाको २ दिन अघि झोला टिपेर काठमाडौं फर्किएको हिजो जस्तो लाग्छ । त्यसयता कुनै पनि दसैंमा घर पुगेको छैन । र, त्यतिबेलादेखि नै हो मैले दसैंको क्यालेन्डर केर्न थालेको ।
‘हिडिङ टु लिस्बन’ फेसबुक स्क्रोल गर्दै थिएँ, हरिशले स्टाटस अपडेट गर्‍यो काठमाडौं एयरपोर्टको ताजा फोटोसहित । ऊ यतै पो आउन लाग्यो । फेरि मेरो मनमा बेचैन थपियो । एक्कासी किन ? भित्तामा हेरेर टोलाउंदै थिएँ, मेसेन्जरमा नोटिफिकेसन आयो । हेरेँ । हरिशको थियो । ‘आई विल ल्याण्ड एट टेन एएम एट लिस्बन एयरपोर्ट, क्यान यु बि दियर’ ? आई ह्याभ मोर वन विक होलिडे विल यु गिभ मि कम्प्यानी ?
‘स्योर’ रेस्पोन्स गरेँ ।
ऊ कसरी अचानक आउँदै छ ? मसँग भेट नभएको लामो समय भएकोले भेट पनि हुने बिदा पनि मनाउने उसको चाहना होला । स्कुलदेखि कलेजसम्मको साथी मलाई पनि भेट्न मन नभएको त कहाँ हो र ? कलेज छुटिएपछि भेट भएको छैन । केहीबेर पुराना याद ‘रिकल’ भो ।
हरिश आएपछि सोध्ने प्रश्नले नै मलाई गिजोल्न थाल्यो । उसले फेरि सोध्ने छ । यहीं आएपछि त मैले पक्कै जवाफ दिनुपर्छ । उसले छाड्ने छैन ।
भित्तामा झुण्डिएको क्यालेन्डर हेरेँ । आधा कोरिएको छ । होमवर्कको कुनै कपी कोरिएको हुँदैनथ्यो मेरो । त्यो उसलाई थाहा छ । कोरेको क्यालेन्डर देखेर उसले पक्कै केही भन्ला ! यसलाई हटाउँ ?
सोचें, यही क्यालेन्डर नै मेरो जवाफ हुनेछ । क्यालेन्डर सँगै पुरानो डायरी पनि राखें । थप सोध्यो भने डायरी हेर भनुँला ।
हाई रबि ! हाउ आर यु ? एयरपोर्टमा देख्नासाथ उसले चिच्यायो, इट्स सर्प्राइज फर यु ! पुरानो हाउभाउ र अमेरिकी शैली मिसाएर चिच्यायो । ‘गुड, वेलकम इन लिस्बन’ उसलाई मनपर्ने ढाकाको खादासहित स्वागत गरेँ । संयोग हरिश ढाका कपडाको कोट लगाएरै निस्केको थियो ।
गम्लङ्ग अँगालो हाल्यौं । न्यास्रोले आँखा रसायो । पुछेर उसलाई गाडीसम्म पुर्याएँ ।
तँ किन नेपाल नगएको ? तेरो दसैं थिएन ? गाडी गुड्न नपाउँदै प्रश्न तेर्स्यायो ।
बिदा मिलेन, औपचारिक जवाफ दिएँ ।
ऊ अझै रोकिएन । वर्षौँदेखिका प्रश्न सोध्न लाग्यो, टिभीमा अन्तर्वार्ता लिए जसरी ।
चुप लाग न्, घर पुगेपछि सबै कुरा गरम्ला, मैले टार्ने उपाय निकालेँ ।
मिटिङ रुममा लगेज राख्नसाथ भित्तामा झुण्डिएको नेपाली क्यालेन्डर देखेर ऊ छक्क पर्‍यो ।
नेपाली क्यालेन्डर पनि हुन्छ यहाँ ? उसले सोध्यो, किन केरेको त ?
हेर्दै जा न थाहा पाउँछस् ।
केरिएको क्यालेन्डर पछि सँगै रहेको डायरी पल्टायो र एकछिनपछि मलाई हेर्यो । मेरो आँखा रसाएका थिए । @aryalsyangja